ट्रम्पको पुननिर्वाचनको बाटो साँघुरो बन्दै, मन नपराउनेको संख्या निरन्तर बढ्दो - Vishwa News
ट्रम्पको पुननिर्वाचनको बाटो साँघुरो बन्दै, मन नपराउनेको संख्या निरन्तर बढ्दो
June 4, 2020 ० बिचार / प्रतिक्रिया
गुगल फाईल फोटो
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनर्निर्वाचनमा सपना दिनहुँ साँघुरो बन्दै भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध कमजोर व्यवस्थापन एवं पछिल्लो समय सामाजीक न्यायका लागि भइरहेको निरन्तरको आन्दोलनले ट्रम्पको अलोकप्रियतालाई बढावा दिएको हो ।
ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता अहिलेसम्म कुनै पनि विश्वासिला मत सर्भेक्षणमा ५० प्रतिशत ‘एप्रुल रेटिङ (लोकप्रियता)’ आर्जन गर्न सकेका छैनन् । अहिले उनको अलोकप्रियता थप न्यून बिन्दुमा आइ पुगेको हो । ‘फाइफ थर्टी एट डट कम’ले निकालेको बिभिन्न स्वतन्त्र मत सर्भेक्षणहरुको औषत तथ्यांक अनुसार ट्रम्पको काम कारवाहीलाई ५३.६ प्रतिशत अमेरिकीले गतिलो नभएको बताएका छन् । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुन पाँच महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै पनि बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो ‘डिस्एप्रुभल’ सबैभन्दा उच्च हो ।
यसअघि यही समयमा जर्ज एच डब्लु बुसको औषत डिस्एप्रुभल ५१.५ प्रतिशत र जिम्मी कार्टरको ५२ प्रतिशत थियो । दुबै जनाले पुनर्निर्वाचन हारेका थिए । बुस पुत्र जर्ज डब्लु बुस २००४ को चुनाव हुन अघि पाँच महिना ४९.५ प्रतिशत डिसएप्रुभलको अवस्थामा थिए । इकार युद्ध टुङ्ग्याउने बाचा गरेर बुसले झिनो मतान्तरमा पुनर्निर्वाचन जितेका थिए । ट्रम्पको एप्रुभल रेटिङ ४२.७ प्रतिशत रहेको छ ।
पोलिटीको /मर्निङ कन्सल्टको पछिल्लो सर्भेक्षणमा ट्रम्पको डिस्एप्रुभल सबैभन्दा धेरै ५५ प्रतिशत रहेको छ । ट्रम्पले धेरै रुचाउने रास्मुसेन पोलमा समेत उनको एप्रुभल केही दिन अघस ४२ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । बुधबार उक्त पोलमा उनको एप्रुभल ४४ प्रतिशत र डिस्एप्रुभल ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
ट्रम्पको समग्र कामको मूल्यांकन मात्र ऋणात्मक रहेको होइन उनी आफ्ना प्रतिश्पर्धी जो बाइडेनसँग अहिलेको अवस्थामा चुनाव आँकलन गरि गरिएका सर्भेक्षणमा पनि धेरै पछि परेका छन् । ‘रियल क्लियर पोलिटिक्स’को औषत तथ्यांक अनुसार अहिले ट्रम्प बाइडेनभन्दा आठ प्रतिशत बिन्दुले पछि छन् । बाइडेनलाई औषत ५० प्रतिशतको समर्थन देखिएको छ भने ट्रम्पलाई ४२ प्रतिशतले मत दिने बताएका छन् । ट्रम्प आफ्ना सम्भावित प्रतिश्पर्धीसँगको मत सर्भेक्षणमा यति ठूलो अन्तरले पछि पर्ने पहिलो वहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् । सन् २००८ र २०१२ को चुनाव हुन पाँच महिना अघि बाराक ओबामा आफ्ना प्रतिश्पर्धीहरु भन्दा औषत दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा कमको मतान्तरमा अगुवाइ गरि रहेका थिए । दुबै चुनाव उनले सहज जितेका थिए ।
राष्ट्रिय स्तरको सर्भेक्षणमा मात्र होइन मुख्य प्रतिश्पर्धी राज्यमा पनि बाइडेनको अवस्था सहज देखिएको छ । २०१६ मा ट्रम्पले जितेका विस्कनसन, एरिजोना, ओहायो लगायत राज्यमा बाइडेनले प्रष्ट अग्रता लिएको सर्भेक्षण बुधबारमात्र फक्स न्यूजको सर्भेक्षणले देखाएको छ । यस्तै अर्को प्रतिश्पर्धी राज्य फ्लोरिडामा बाइडेनले उछिनेको अर्को सर्भेक्षण सिबिएस न्युजले प्रकाशित गरेको छ भने लामो समय रिपब्लिकनको एकछत्र रहेको टेक्सासमा बराबर प्रतिश्पर्धा देखिएको कुन्निपियाक विश्वविद्यालयकव सर्भेक्षण पनि बुधबारै नै प्रकाशित भएको छ ।
नेपाल र फ्रान्सबीच परामर्श संयन्त्र स्थापना
हाम्रो पार्टी नेतृत्व घेराबन्दीमा प¥यो
महरा जेल जान सक्ने : प्रहरीले मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रतिबेदन बुझायो
यस वर्षको जगदम्बा–श्री शान्ति ठटाल र मदन पुरस्कार चन्द्रप्रकाश बानियाँलाई
जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ४११ पुग्यो
काठमाडौं उपत्यकामा ७६७ जना कोरोना संक्रमित थपिए
नेपालमा थप १३२५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ६४ हजार नाघ्यो
श्रेष्ठले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप, बने पहिलो नेपाली
महोत्तरीमा जीप र मोटरसाइकल जुधे, २ जनाको मृत्यु
आइपीएलको १३ औं संस्करण : मुम्बईलाई चेन्नईले हरायो
क्यानडामा डेढ महिनामा तीन नेपालीको मृत्यु
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको ट्यांकर त्रिशुलीमा खस्यो
युट्युव तथा सामाजिक संजाल बाट हुने आम्दानीलाई बैधता
आज जनकपुर आउँदै नेपाली रेल
५० प्रतिशत यात्रु राखेर उडान गर्न नसक्ने एयरलाइन्स कम्पनीको अडान
अमेरिकी सर्बोच्च अदालतकी न्यायाधिश गिन्सबर्गको निधन
स्व. राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्झनामा ‘उनको प्रीति’
सकियो कुलमानको कार्यकाल, थप हुने-नहुने अन्यौल
कसले रोक्यो कुलमानको नियुक्ति ?
डा. केसीले जुम्लाबाट थाले १९ औं सत्याग्रह
अन्ततः बामदेव गौतम बन्ने भए सांसद
अमेरिकामा डडेलोको कहर, ३५ को गयो ज्यान
बिदा भए कुलमान, प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा कोइराला
न्युयोर्कमा डिजे एलएसले च्यारिटीको लागि भलिबल प्रतियोगिता गराउने
यस्तो छ भदौ १६ गतेदेखि हुने नियमित र चार्टर उडानको तालिका